Minenhle Ngubane – The Ulwazi Programme
IMinenhle Broadcasting Academy
Umuntu ngeke umenze lutho ngento akabelwe yona emhlabeni, sonke sizalwa sifumbethe okwethu ezandleni kanti ke noma sikhula sikhula nezifiso zokuthi esikufisayo kube impumelelo futhi kufezeke. Abanye abantu baphiwe ukuthi bakwazi ukuziphilisa ngokuzisebenza, abanye babe abammeli abanye babe amaciko njalonjalo. Kuleli khasi ke sithi ake siphinde sibhunge ngentokazi esencane kakhulu kepha imisebenzi yayo ekhulile futhi edinga … Read more
Categories News, People Tags iMinenhle Broadcasting Academy, Minenhle Ngubane
Kulenyanga yamagugu esizwe, ngithe akengihlube udlub’ekhasini ngilobe ngamanye amagugu esizwe sethu. Ubuciko nobugagu yinto esizalwa nayo, okuyinto abanye bethu abangayifundelanga esikoleni njengezinye zeziqu ezifundelwayo. Kuleli khasi siloba ngentokazi esencane kodwa esidodile ngemisebenzi yayo kwezobuciko, lentokazi kungabuye kube ubani ngaphandle kuka Minenhle Ngubane. Leliciko elingumsakazi womsakazo obizwa ngokuthi yi Ean Touch Radio Station lizalwa eGreytown nokuyila efunde … Read more
Categories People Tags iChalaha, Media, Minenhle Ngubane, Mjikijelwa Ngubane, Radio, Umsakazo